Manatanteraka Ny Nofinofy Olaimpikan’i Grenade i Kirani James · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Aogositra 2012 4:01 GMT
Vakio amin'ny teny Filipino, Español, English
Ny Alatsinainy 6 Aogositra 2012, mahazo Medaly Volamena tamin'ny hazahazaka 400 m Lehilahy, tamin'ny ampaham-pooana 43.94 tamin'ny Olaipika ao Londona i Kirani James , mametraka azy ho ny olona voalohany avy any Grenade sy ny Fikambanan'ireo Firenena Karibeana Tatsinanana nahazo medaly Olaimpika toy izany. James no nitarika ny nitarika ny fakàna medaly Karibeana tamin'ity hetsika ity: Luguelin Santos avy any amin'ny Repoblika Dominikana no nahazo ny medaly Volafotsy (44.46) ary i Lalonde Gordon avy any Trinidad & Tobago no nibata ny Alimo (44.52)
Ilay mpandefa vaovao, George Grant, dia nahita ny fandresen'i Kirani ho toy ny hetsika iray izay tokony handrisika bebe kokoa ireo Grenadiana any ivelany mba hanome tohana :
Nefa, ireo Grenadiana any ivelany dia afaka manampy amin'ny alàlan'ny fomba maro samihafa tsy asiana fisehosehoana be. Dr. Kenrick Lewis no ohatra mivaingana amin'izany. Nandritra ny taona maro, Dr. Lewis, simista ‘catalyseur’ malaza amin'ny fandraisany anjara amin'ny fanamboarana ny “silicones”, dia nanome vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra any amin'ireo sekoly ambataronga fototra ao amin'ny Paroasin'i St. John mba ho afaka manohy amin'ny sekoly ambaratonga faharoa ao Grenade.
Kirani James, mpianatra tao amin'ny sekoly Ambaratonga Fototra Anglikana St. John, dia nahazo iray tamin'ny vatsim-pianaran'i Dr. Lewis. Izany vatsim-pianarana izany no nanome an'i Kirani ny fahafahana hiatrika ny fampianarana ta amin'ny Grenada Boys’ Secondary School (GBSS) Sekoly Ambaratonga Faharoa Ho An-Jazalay ao Grenade izay namiratany tokoa. Eny e, azo lazaina hoe tantara sisa ny tohiny.
Abeni, izay mipetraka koa any St. Vincent & Grenadines, dia niravoravo koa noho i Kirani sy ireo mpiray tanindrazana aminy :
Tamin'ny 2012, voasoratra ny tantara rehefa injay zazalahy iray 19 taona, Kirani James avy ao Grenade nihazakazaka nahazendana tamin'ny 43.94 mba handrombaka ny volamena. Heveriko fa azo antoka ny hilazana hoe tsy vitan'ny mihorohoro fotsiny ny Amerikana fa na ny zava-bitan'i Michael Johnson koa aza mihozongozona.
Grenada, ilay bitika indrindra any amin'ny farany atsimon'ireo Nosin'ny Rivotra (Windward Islands) dia niavaka foana tamin'ireo mpifanolobodirindrina aminy. Ilay nosin'ny hanitra “Spice isle” araka ny fiantso azy am-pitiavana noho ireo vokatra voan-javatra “noix de muscade” avy aminy sy ireo hanitra hafa dia nanao foana izay hametrahana ny lanjany.
Izao dia i Kirani James no nanolotra ilay nosy ny medaly volamena Olaimpika voalohany ho azy mba ho fanombohana ny famenoana ny volamena efa azony tamin'ny Worlds 2011. Fanampin'izany, nanohy ny hazakazaka makotrok'i Grenade i Janelle Redhead tao amin'ny Lalao Olaimpika tamin'ny nahatafakatra azy ho amin'ny manasa-dàlan'ny 200 m vehivavy .
Goavana ianao ry Grenade, 133 miles tora-droa sy 93,000 eto amin'izao tontolo izao.
Naharay fanehoan-kevitra mampahery maro ihany koa i James tao amin'ny Facebook amin'ilay antsoin'ny mpikirakira aterineto hoe “iray amin'ireo fotoana nahafinaritra indrindra tamin'ny Olaimpika”. Caribbean Beat nanoratra hoe :
Ilay kintan'i Grenade, Kirani James -taorian'ny fandreseny tamin'ny manasa-dàlan'ny 400m – dia nifanakalo ‘dossards’ tamin'ilay mahery fo,. manana ny talentany tapaka tongotra roa, Oscar Pistorius, eo ampiafaran'ny hazakazaka. Tsy mbola nirehareha fatratra toy izany isika amin'ny fanànana mpanao fanatanjahantena toy izany eo alohantska.
Nahasarika fanehoan-kevitra 30, fizaràna 269 ary fankafizana maherin'ny 275 ilay zava-boasoratra teo amin'ny rindriny.
Nisy olona marobe nitangorona teoamin'ny kianja Cuthbert Peters tao amin'ny tanàna niavian'i Kirani ao Gouyave mba hijery ilay hazakazaka tain'ny fàfana lehibe iray :
Fitangornan'olona marobe iray hafa tao Morne Rouge, St. Georges :
Ireo olona marobe efa nijery nialoha tao Gouyave :
Vantany vao nandresy i Kirani, horakoraka sy saritka no nanaraka izany :
Tsy niandry ela dia nivadika ho fety an-dalambe ilay fankalazana :
Ny Praiminisitr'i Grenade, Tillman Thomas, dianikabary ho an'ireo olona marobe tao Gouyave taorian'ny lanonana fanolorana ny medaly :
Ankehitriny, Kirani James dia namerina nanoratra indray ny tantaran'i Grenade tamin'ny alàlan'ny tongony. Tsy ny voan-javatra “noix de muscade”, ny revolisiona sy ny fananiham-bohitra irery intsony no hampalaza an'i Grenade:
“Kirani City” nataon'ilay Grenadiana mpiangaly mozika, Hollis Mapp aka Mr. Killa:
Lahatsary ahitàna ny tanàna niavian'i Kirani, Gouyav.:
Ny hajiantsary niasa ato amin'ity lahatsoratra ity, Kirani James, dia an'i Sum_of_Marc, nampiasaina teo ambanin'ny Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) Creative Commons license. Tsidiho ny rantin-.tsarin'i Sum_of_Marc ao amin'ny flickr.
1 andro izaySuriname
4 andro izayEtazonia